Kutholwe ngaphakathi ezindongeni isizwe ezincane kunazo zonke emhlabeni, Vatican City, Basilica iSt Peter sika ngokungangabazeki omunye migilingwane impucuko owasindisa izakhiwo kanye art. Manje ladonsa umdwebo 10 abayizigidi ezingu izivakashi ngonyaka, lesi sakhiwo emangalisa engama Square St Peter futhi inama Ukuhlangana eziholela yobuciko mlando, zamatshe amhlophe futhi Dome KaMose-ngaphakathi yisakhiwo sodumo elaklanywa Michelangelo (okuyinto ungakwazi ekhuphukela phezulu, uma uke ulinge uthathe phezu 491 izinyathelo endleleni!).
Kutholwe edolobheni eTurkey onqamula, Istanbul, Sultan Ahmed Mosque sivame ukubizwa ngokuthi yi-Blue Mosque ngenxa Ingaphakathi layo eliyingqayizivele okwesibhakabhaka. Lakhiwa WaseTurkey sultan Ahmed mina phakathi 1609 futhi 1616, lokhu isakhiwo esihlaba umxhwele uba kokubili ezinkulu izivakashi futhi indawo esebenzayo yokukhulekela, okusho mosque ivaliwe yokungakhokhi abakhulekeli ngesikhathi imithandazo emihlanu nsuku zonke – izikhathi ethandaza kungaba ihlolwe lapha ngaphambi kokuba uye.
Kukhona ingubo imithetho eqinile ukuthi bonke abavakashi kufanele kubanjelelwe kuyo ngaphambi kokungena mosque. Okokuqala, izicathulo kumelwe kususwe wabekwa ecacile upulasitiki olunikezwa mosque mahhala – wena-ke zithole ithuba ukushiya izicathulo zakho emgodini cubby noma ukuthwala isikhwama nawe. Uma kuziwa izingubo zakho, amadoda kufanele ukhethe izingubo okuxekethile ukuqinisekisa ngemilenze embozwe, kokugwema izinto ezifana uwumnikazi wenkampani futhi kufanale agqoke izikhindi. Abesifazane kufanele futhi ukugqoka okuxekethile esinamathelayo izingubo, ngenkathi iqinisekisa izingalo zabo, imilenze, futhi izinwele zabo zisitshekelwe nhlobo amaphuzu. Lokhu kusho ukuthi abesifazane kulindeleke ukuthi afake headscarf lapho ngaphakathi, njengoba lokhu kungaba umqondo omusha izivakashi eziningi ze-non-Muslim Western, sincoma ukufunda indlela efanele ukugqoka lokhu izingubo kubalulekile nesizotha ngaphambi uvakasha.
Vula abasontayo izivakashi kusukela ngekhulu le-19, I Sagrada Familia Basilica wena Uthola 4.5 abayizigidi ezingu izivakashi njalo ngonyaka futhi manje usebenza Ngabagibeli abanamathikithi entry uhlelo ngenxa – lokhu kuyatholakala ukuthenga inthanethi kufika ezinyangeni ezimbili ngaphambi kosuku ukuvakasha kwakho. Lezi amathikithi ukusebenza fixed izikhathi entry njengendlela yokuthola ekunciphiseni ukuminyana, Nokho, uma ungumuntu ngaphakathi Ukhululekile ukuchitha nje ongathanda kokuncoma ingaphakathi umxhwele. Sincoma ngokuvumela okungenani 2 amahora ukuthatha kahle kule wonder yezakhiwo. Ukuze izivakashi ufuna khona enkonzweni, mass ebibanjelwe 9am njalo ngeSonto 8pm njalo ngoMgqibelo, kuze kube nini nanini 1 ihora kokuba aqhutshwa ngezilimi eziningana.
Europe iyikhaya eziningi izindawo ezinhle yokukhulekela encapsulate ngempela amandla esingenakuqhathaniswa izakhiwo kanye ugqozi zenkolo. Ukuze ubone lezi izindawo lokuqala isandla, ukuhamba nezwekazi sihamba ngesitimela ukubhuka nge Londoloza Isitimela to leave no stone upturned across Europe’s many sights and attractions.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “3 Of yaseYurophu Okumele-Bheka Izindawo Zokukhulekela” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
LaSagradaFamilia Mosque Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips vaticancity worship